Supercell's Brawl Stars Oo Caalamka Oo Dhan Ka Bilaabmay 3v3 Kulan | Androidsis
Manuel Ramirez | | La cusboonaysiiyay 24/02/2020 11:44 | Ciyaaraha Android
Waxaan runtii rabnay inaan awoodno inaan ku ciyaarno Xiddigaha Brawl Xiddigaha 'Android' waana la heli karaa laga bilaabo maanta. Ciyaar Supercell ah oo isku dayi doonta inay noqoto guul kale oo weyn oo istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ah oo leh Clash Royale, Clash of Clans, Hay Day iyo Boom Beach oo ku hoos jira suunka.
tag sugaya ciyaar waali ah 3 vs 3 ciyaartoy ah oo ah multiplayer khadka tooska ah oo aad wax badan ka qaniini karto sidii aad ku sameysay Clash Royale, inkasta oo farqiga weyn ee aad ugu guuri doonto waqtiga dhabta ah MOBA oo dhan oo ku yaal LoL.
1 Waxqabad weyn oo loogu talagalay mid kale oo weyn oo Supercell ah
2 Dagaalyahanada Xiddigaha Brawl
3 MOBA oo ka soo tumata gaadhiga
Waxqabad weyn oo loogu talagalay mid kale oo weyn oo Supercell ah
Haddii Supercell u taagan yahay wax, waa loogu talagalay tayada weyn ee mid kasta oo ka mid ah cinwaannada kaas oo u bilaabaya suuqa qalabka mobilada. Waxaan wajaheynaa Blizzard kale oo faahfaahin kasta la koolkooliyo si nooca ugu horeeya u yimaado sida ugu macquulsan. Sidan ayay ku siiyaan dharbaaxada ugu horeysa si aad u wanaagsan si markaa inta soo hartay ay yihiin cusbooneysiin leh waxyaabo aad u wanaagsan; sida ay u dhacday imaatinka 'Clash Royale' iyo ciyaaraha intiisa kale. Wax aan ka dhihi karno Clash Royale.
Qaad durba laga heli karo macruufka dhawr bilood oo wanaagsan, sidaa darteed si dhib leh naguma yaabiso innaba. Waxa kaliya ayaa ah rabitaanka ah inaan ku raaxeysan karno Android-keena si aan nafteena ugu qaniino kumanaanka ciyaartoy ee safarkooda ka bilaabi doona Brawl Stars laga bilaabo maanta.
Tani waxay horeyba uga dhigan tahay in dad badani bilaabi doonaan inay ku raaxaystaan ​​iyo wajihi doonaan kumanaan ciyaartoy adduunka oo dhan iyadoo dhammaan qaababka loo heli karo ciyaaro soconaya 3 daqiiqo. Haa, way noqon doonaan kuwo deg deg badan oo waali ah si ilbiriqsiyo gudahood aad ula kulanto dhamaan ciyaartoydaan iyaga oo wata astaamo cusub oo dagaal ah.
Dagaalyahanada Xiddigaha Brawl
Halkan, iyo sidii Clash Royale, waa inaan furid dagaalyahannada ama dagaalyahannada kaas oo aad uga awood badnaan karto. Kuwani waxay noo oggolaan doonaan inaan sii deyno weerarrada ugu xoogga badan dagaalka, inaan kula guuleysano koobab iyo xitaa inaan ku horumarinno dhibco xoog leh. Ma seegi karno awoodda aan "ugu lebbisanno" dhinacyo cusub oo gaar ah oo aan ku guuleysan doonno inta aan ku horumarayno cayaartan loo yaqaan 'MOBA-style PVP game'.
Xiddigaha Brawl waxay leeyihiin habab badan:
Qabtay (3v3): waa inaad soo qabataa 10 dhagax oo aad ku guuleysato.
Badbaadin: Qaabka kali ama qaabka labada, midka ugu dambeeya ee taagan ayaa guuleysta (Haa, royale dagaal yar Nooca PUBG Mobile).
Dagaalyahan (3v3): kooxda hela xiddigaha ugu badan ee yaqaana sida loo helo ayaa guuleysan doonta.
Heist (3v3): waxaad u baahan doontaa inaad ilaaliso amniga kooxdaada oo aad isku daydo inaad la wareegto kooxda cadowga.
Kubad Dagaal (3v3): halkan kubaddu waxay noqon doontaa halyeeyada ugu weyn. Waxaan kuu ogolaaneynaa inaad ogaato naftaada.
Dhamaan qaababkan waxay noo ogolaan doonaan inaan fuulno miiska ciyaartoyda ugu fiican adduunka, sidaas darteed waa muhiim inaan si dhab ah u qaadanno. Mana jiri doono dhacdooyinka caadiga ah ama inaan iskudarsano koox ama aan sameysano mid si aan diirada u saarno hagaajinta kulamada udhaxeeya seddex ciyaaryahan ee ka dhanka ah kuwa kale
MOBA oo ka soo tumata gaadhiga
Waxa aan uga tagnay Xiddigaha Brawl waa taas ayaa imanaysa iyadoo la tumanayo. Haddii Supercell uu ka gaabiyay inuu u soo bandhigo Android, waa iyada oo loo keenayo sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan (iyo haa, ciyaartoyda iOS-ka waxay ahaayeen "tijaabiyeyaasha beta"). Xitaa waxay u ogolaatay raaxada ciyaartooyda laftooda inay awoodaan inay abuuraan khariidado, sidaa darteed baashaalka iyo waxyaabaha ku jira waa ka sii kalsooni badan yihiin. Goor dhaw filo war cusub.
Farsamo ahaan waa si aad u wanaagsan ayaa loo gaadhay waxayna muujineysaa waxqabadka mid kasta oo ka mid ah ciyaaraha. Garaaf ahaan waa toban, in kastoo laga yaabee in muuqaalkaas muuqaalka ahi aanu u cuntamayn qof walba. Waxay muujineysaa, iyo wax badan, in kooxda ka dambeysa horumarinteeda ay ka shaqeeyeen.
Brawl Stars waxay u timaadaa Android si ay u muujiso inay noqon doonto cinwaan kale taasi waxay qadarin doontaa dib u eegisyo badan oo togan, ciyaartoy badan oo ciyaara iyo dhadhanka si fiican uga tagay Supercell-kii hore Mid kale oo weyn ayaa kuu imanaya Android si aad ugu raaxaysato kirismaskan.
Ciyaarahaaga cayaaraha badan
Horumar farsamo oo weyn
Waxaad ubaahantahay waqti noloshaada ah si aad uhesho dagaalyahano wanaagsan, iyo hadii kale, inaad bixiso
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Super Cell's Brawls Stars ayaa haatan soo baxay, Hit kale oo weyn sida Clash Royale iyo Clash of Clans?